DHAGEYSO Xubnaha aqalka sare oo sheegay inay soo gabagabeeyeen wadatashiyada ay la lahaayeen dadka deegaannada Koonfur Galbeed. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Xubnaha aqalka sare oo sheegay inay soo gabagabeeyeen wadatashiyada ay la lahaayeen dadka deegaannada Koonfur Galbeed.
Xildhibaanaada aqalka saree e Soomaaliya ee ku sugan magaalada baydhabo ee xarunta Bay halkaasna u tagay sidii ay xal uga gaari lahaayeen khilaafka u dhexeeya dowlada dhexe ee Soomaaliya iyo maamulada Xubnaha ka ah ayaa sheegay inay soo gabagabeeyeen wadatashiyadii ay maalmihii la soo dhaafay ka wadeen deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliy.
Xubnha aqalka saree magaalada Baybdhabo loo diray ayaa kulamo kala duwan waxay la soo qaateen madaxda maamulkaasi iyo qaybaha kale ee bulshada waxayna kala hadleen waxyaabaha ay tabanayaan.
Senator Axmed Macalin Cumar Nadiir oo warbahainta la hadlaya ayaa sheegay inay dhagaysteen dhamaan cabashooyinka ay dhinacyada ay la kulmeen qabeen gaar ahaan waxyaabaha ay ka tabanayaan dowlada dhexe ee Soomaaliya.
Senetor Nadiir ayaa sheegay in dhamaan waxyaabihii ay soo ururiyeen ay la wadaagi doonaan gudoonka aqalka sare ,wuxuuna ku baaqay in la garab istagao shacabka ku nool magaalaa Baydhabo gaar ahaan haweenka oo uu sheegay inay cabashooyin badan muujiyeen.
Xubnaha ka tirsan aqalka saree ee loo xil saaray xalinta tabashooyinka maamul goboleedyada ay ka muujiyeen dowlada dhexe ayaa masuuliyiinta maamulada iyo qaybaha kala duwan ee Bulshada waxay kulamo kula qaateen magaalooyinka Baydhabo,Kismaanyo,Garowe iyo Dhuusamareeb qaarkood ayaana sheegay inay soo gabagabeeyeen wadatashiyadii ay la yeesheen dhinacyadaa natiijada ugu danbaysana ay gayn doonan xarunta aqalka saree ee horay looga soo diray.
← DHAGEYSO Xildhibaanada aqalka sare oo sheegay in waxyaabaha loo soo gudbiyay ay ka mid tahay fara galin ay dowlada dhexe ku hayso mamaulka Jubaland.
President Uhuru signs Finance Bill 2018 →